ကြက်ဥက အရင်ဖြစ်တာလား? ကြက်မက အရင်ဖြစ်တာလား? – Let Pan Daily
ကြက်ဥက အရင်ဖြစ်တာလား? ကြက်မက အရင်ဖြစ်တာလား?
Let Pan | November 4, 2020 | Knowledge | No Comments
ကြက်ဥက အရင်ဖြစ်တာလား ကြက်မကအရင်ဖြစ်တာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ လူတော်တော်များများငြင်းခုန်နေကြတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက ကြက်မ မရှိဘဲ ဥ မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ ပြောကြသလို တစ်ချို့လူတွေကလည်း ကြက်ဥမရှိဘဲ ကြက်မ မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ လူတွေဘယ်လိုပဲပြောနေပါစေ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ တိကျခိုင်မာတဲ့ သိပ္ပံပညာရပ်နဲ့ အဖြေထုတ်ပေးထားလိုက်ပါပြီ။
ကြက်ဥတွေက ကြက်တွေထက် ပိုစောပါတယ်။ ဒိုင်နိုဆောတွေ ဥအုကြတယ်။ ပြီးတော့ ပင်လယ်ထဲကနေ ကုန်းပေါ်တက်လာတဲ့ ပထမဆုံး ငါးမျိုးနွယ်ဝင်တွေကလည်း ဥ ဥချကြပါတယ်။ ပိုပြီးထူးဆန်းတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း (၅၀၀) ခန့် Cambrian ခေတ်တုန်းအခါက ပင်လယ်တိမ်ပိုင်းမှာ ကျက်စားခဲ့ကြတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကလည်း ဥ ဥကြတာပါပဲ။ ဥ ဆိုတာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဒါတွေက သက်သေပါပဲ။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အပြည့်အဝ လက်ခံကောင်း လက်ခံမိပါလိမ့်မယ်။ ကြက်ဥ အရင် ကြက်မဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလက်ခံဖို့ကတော့ အခုထပ်ပြောမယ့်အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုမြင်သလဲ ဆိုတာအပေါ်ပဲ မူတည်နေပါတယ်။ Warwick နဲ့Sheffield တက္ကသိုလ်တွေက သုတေသနပြုသူတွေကတော့ ကြက်ဥဆိုတာ ဖြစ်လာဖို့အတွက် ကြက်မရဲ့ သားဥအိမ်က ပရိုတိန်းဓာတ်လိုကို လိုတယ် လို့ ပြောကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း ကြက်ဥတိုင်းဟာ ကြက်မကနေရတာပါ။ ဒါကြောင့် လူတွေက ကြက်မကသာ အရင် ဖြစ်တယ် လို့ ယူဆနေကြတာပါ။ ဒါလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ ကိုယ့်ယူဆချက်နဲ့ကိုယ်ရှိကြတာ ပုံမှန်ပါပဲ။
ငှက်တွေ ကြက်တွေရယ်လို့ မဖြစ်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက ငါးတွေလောက်သာ ဆင့်ကဲတိုးတက်မှု ဖြစ်နေစဉ် ကတည်းက ဥတွေ ရှိနေခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း အချိန်တစ်ခုအကြာမှာ ကြက်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ငှက်တစ်မျိုးက ဥ ဥချလိုက်တယ်။ အဲဒီဥကနေ ပထမဆုံး ကြက်ဆိုတဲ့ သတ္တဝါတစ်ကောင် ပေါက်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ ပညာရှင်တွေ သုသေတနပြု ထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း အမြင်တွေ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
ၾကက္ဥက အရင္ျဖစ္တာလား ၾကက္မကအရင္ျဖစ္တာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းဟာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျငင္းခုန္ေနၾကတဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ၾကက္မ မရွိဘဲ ဥ မျဖစ္လာႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြကလည္း ၾကက္ဥမရွိဘဲ ၾကက္မ မျဖစ္လာႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ လူေတြဘယ္လိုပဲေျပာေနပါေစ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ တိက်ခိုင္မာတဲ့ သိပၸံပညာရပ္နဲ႔ အေျဖထုတ္ေပးထားလိုက္ပါၿပီ။
ၾကက္ဥေတြက ၾကက္ေတြထက္ ပိုေစာပါတယ္။ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြ ဥအုၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပင္လယ္ထဲကေန ကုန္းေပၚတက္လာတဲ့ ပထမဆုံး ငါးမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ေတြကလည္း ဥ ဥခ်ၾကပါတယ္။ ပိုၿပီးထူးဆန္းတာက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သန္းေပါင္း (၅၀၀) ခန္႔ Cambrian ေခတ္တုန္းအခါက ပင္လယ္တိမ္ပိုင္းမွာ က်က္စားခဲ့ၾကတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြကလည္း ဥ ဥၾကတာပါပဲ။ ဥ ဆိုတာ ေရွးပေဝသဏီကတည္းက ရွိေနတယ္ဆိုတာ ဒါေတြက သက္ေသပါပဲ။ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အဝ လက္ခံေကာင္း လက္ခံမိပါလိမ့္မယ္။ ၾကက္ဥ အရင္ ၾကက္မျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလက္ခံဖို႔ကေတာ့ အခုထပ္ေျပာမယ့္အေၾကာင္းကို ပရိသတ္ေတြ ဘယ္လိုျမင္သလဲ ဆိုတာအေပၚပဲ မူတည္ေနပါတယ္။ Warwick နဲ႔Sheffield တကၠသိုလ္ေတြက သုေတသနျပဳသူေတြကေတာ့ ၾကက္ဥဆိုတာ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ၾကက္မရဲ႕ သားဥအိမ္က ပ႐ိုတိန္းဓာတ္လိုကို လိုတယ္ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း ၾကက္ဥတိုင္းဟာ ၾကက္မကေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက ၾကက္မကသာ အရင္ ျဖစ္တယ္ လို႔ ယူဆေနၾကတာပါ။ ဒါလည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ကိုယ့္ယူဆခ်က္နဲ႔ကိုယ္ရွိၾကတာ ပုံမွန္ပါပဲ။
ငွက္ေတြ ၾကက္ေတြရယ္လို႔ မျဖစ္ခင္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုန္းက ငါးေတြေလာက္သာ ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေနစဥ္ ကတည္းက ဥေတြ ရွိေနခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္တစ္ခုအၾကာမွာ ၾကက္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ငွက္တစ္မ်ိဳးက ဥ ဥခ်လိုက္တယ္။ အဲဒီဥကေန ပထမဆုံး ၾကက္ဆိုတဲ့ သတၱဝါတစ္ေကာင္ ေပါက္လာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ပညာရွင္ေတြ သုေသတနျပဳ ထားတာပါ။ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔လည္း အျမင္ေတြ ကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။
(၇)ရက် တိုင်တိုင် သတိလစ်ပြီး ငရဲပြည် ကို ရောက်သွား ခဲ့တဲ့ အကြောင်း – ဖြစ်ရပ်မှန်
အဖမ်းခံ ထားရတဲ့ ဗေဒင် ပညာရှင် လင်းညို့တာရာ ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရှေ့ဖြစ် ဟောကိန်း..
ေယာက်ာ္းေတြကို စိတ္နာ ဒီေနရာ ကို အတြဲလာ ကြဲေစ ဆိုတဲ့ က်ိန္စာ (သို႔မဟုတ္) မိန္းမရဲ ေတာင္ေတာ္ သခင္မ သမိုင္း
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာ္ေတာ္ ႀကီး ၏ အံဖြယ္ ေျခရာေတာ္ အေၾကာင္း (မွ်ေဝျခင္း ျဖင့္ ကံလာဘ္ပြင့္ႏိုင္ ပါေစ)
သူမတို့ လက်ထက်တွင်အယူလွဲမှားနေတဲ့ ရာဇဝင်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲပစ် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြတ်သားစွာ ပြောလိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ
လူငယ်တွေ နဲ့ အတူ လမ်းပေါ်ထွက်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် အားဖြည့်နေခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး ဦးဇင်ဝိုင်း
မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ကို ရရှိသွားတဲ့ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ၏ ဘဝ အပြည့်အစုံ
နေပူကြီးထဲ မှာတောင် အားမာန် အပြည့်နဲ့ပါ၀င်လှုပ်ရှားကာ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေ နဲ့ ဆက်တိုက် လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ ခေးဆက်သွင်
အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ရင်ကွဲမတက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့အကြောင်း ယူကြုံးမရစွာ ပြောပြလာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ သူရဲကောင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံး အိမ်ပြန်ခရီးကိုကိုယ်တိုင် လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေး ခဲ့တဲ့ ထွန်းကိုကို ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်